तपाईंको स्वास्थ्यलाई अन्तराष्ट्रिय उपवासको साथ सशक्त बनाउनुहोस् - Dynamic Sets
Home / Power of Meditiation / तपाईंको स्वास्थ्यलाई अन्तराष्ट्रिय उपवासको साथ सशक्त बनाउनुहोस्
7:48 PM - Power of Meditiation
हामी कसरी खान्छौं त्यहाँ एक नयाँ प्रवृत्ति छ, वा सम्भवतः मैले भन्नुपर्दछ हामी कति पटक खान्छौं। यो लोकप्रियता तथ्यको कारणले हो कि यसले मानिसहरूलाई वास्तविक भोकको प्रभावसँग डिलिन बिना वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसले पुरानो रोगहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै मधुमेह, क्यान्सर र हृदय रोग। यो नयाँ चलन के हो? "आंतरायिक उपवास" वा यदि यो खेलको नाम हो। बीच-बीचमा उपवास बस्नु वास्तवमै कुनै नयाँ कुरा होइन। वास्तवमा, यदि हाम्रो मूल पुर्खाहरूको पछि लाग्दछ। यो एक खाने रणनीति हो जुन हाम्रो डीएनएमा छापिएको छ किनभने हाम्रा पिता-पुर्खाहरूले खाने भोजनको तालिका अभ्यास गरे। उनीहरूसँग शाब्दिक रूपमा यस विषयमा कुनै विकल्प थिएन। तिनीहरूसँग हामीसँग भएको खानाको पहुँचको सहज आवृत्ति र सहजता थिएन।
हाम्रो खाने विन्डो - खाने तिर यो नयाँ रणनीति खाना छोड्ने मात्र होईन। यो द्रुत राज्यमा सकेसम्म धेरै समय खर्च गर्ने बारेमा हो। कुनै पनि प्रकारको उपवास परिभाषित गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसलाई खाने बानीमा परिवर्तनको रूपमा सोच्नु हो। यदि IF को मामला मा, दिनमा एक दिन मा तीन वर्ग खाना, वा दिन भर मा एक मुट्ठी भर साना खाना को ठाउँमा, त्यहाँ समय को एक विन्डो छ जब हामीलाई खाने अनुमति दिईन्छ। यो दिनको केही घण्टाको रूपमा लिन सक्दछ, वा उपवास विन्डोले हप्ताको केही दिनहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यो समयमा, हामी हामी जे पनी खान सक्छौं - को पाठ्यक्रम को कारण भित्र। हाम्रो "खाने विन्डो" लाई टाढा राख्दा हाम्रो दिमाग हाम्रो शरीरसँग मेल खान्छ ताकि हामी वास्तविक भोकले वास्तवमै कस्तो महसुस गर्छौं भनेर बुझ्न सक्दछौं। भोकाएको बारेमा छैन। उपवास भनेको भोकाउनुको मतलब होइन, तर यो खाना पनि होईन। शाब्दिक परिभाषा हो: "एक विशिष्ट अवधिमा खाना र पेय पदार्थबाट अलग रहनु।" IF एक दिन मा दुई खाना खान को बारे मा छ तीन (वा गुणन) भन्दा को लागी तपाईं एक 16 घण्टा उपवास अवधि परिचय। तपाईं या त नाश्ता र खाजा वा लंच र डिनर रोज्न सक्नुहुन्छ, र यो खानको लागि एक शक्तिशाली दृष्टिकोण साबित भइरहेको छ। पश्चिमी विश्व एक द्रुत राज्य मा कम समय को लागी खर्च गर्दछ। साँचो भोक भनेको त्यस्तो चीज हो जुन हामीले प्रत्येक १ 16-२4 घण्टाको अनुभव लिनुपर्दछ, हरेक चार घण्टामा होइन हामी अभ्यस्त छौं। अधिकांशको लागि, त्यहाँ साँझदेखि बिहानसम्म निरन्तर चरिरहेको हुन्छ, र केहि व्यक्तिहरूको लागि राती अबेर सम्म। कसैको लागि काम गर्दैन जसको आहार केन्द्रहरू चिपहरू जस्तै प्रशोधित खानाको वरपर छन्। उपवासको लागि हामीलाई प्राय: सम्पूर्ण खानाको आहारमा टाँसिन आवश्यक छ, तर तरकारीहरूसहित, दुबै प्रोटिनहरू, स्वस्थ कार्बोहाइड्रेटहरू र फ्याटहरू को उत्तम र द्रुत लाभहरूको अनुभव गर्न। दिनको लागि छनौट भएका दुई खानाहरू पोषण र पूर्ण सन्तुलनले भरिएको हुनु पर्छ। यो अनुमान गरिएको छ कि आजको आधुनिक संसारमा प्रत्येक दुई मध्ये एक व्यक्ति मोटो र बढी वजनको छ र लाखौं जटिलताबाट मरेका छन् जुन यस सत्यबाट उत्पन्न भएको छ। शरीरको तौल प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ र साथसाथै जीवन विस्तार क्षेत्रको एक शक्तिशाली उपकरण हो।
जब सम्म तपाईं राती अबेरसम्म नाश्ता गर्नुहुन्न, तपाईं सम्भवतः आफ्नो तालिकामा एक रूप सम्मिलित गर्नुहुन्छ, दैनिक १२ घण्टा दैनिक उपवास। यद्यपि, हालको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि केहि फाइदाहरूका लागि उप्रान्त लामो अवधिको अनुभव गर्न आवश्यक पर्दछ, गतिविधि गतिविधिमा निर्भर गर्दै २०-२4 घण्टा सम्म। जनावरहरू र मानवहरूमा को प्रस्तावित फाइदाहरू "राम्रो देखिन्छन्", "" राम्रो महसुस गर्नुहोस्, "र" अब बाँच्नुहोस् "को लुगा धुने सूची जस्तो पढ्छन् ... सीमित खानको सन्झ्याल हुनु धेरै कम गाह्रो हुन्छ पनी त्यसपछि क्यालोरी सीमित गर्न। यदि फ्याट तौल लिन र राम्रो तौल (मांसपेशी ऊतक) राख्नका लागि साच्चै सरल रणनीतिहरू मध्ये एक हो भने र व्यवहारमा एकदम थोरै परिवर्तनको आवश्यक पर्दछ। बुढेसकालको प्रक्रिया सुस्त गर्दै, ऊर्जा स्तर बढाउनु र प्रतिरोधात्मक प्रणाली पुनःबुट गर्नु सबै फाइदाहरू हुन् जब तपाईं आफ्नो खाने तालिकामा समावेश गर्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? निर्णय गर्नुहोस् कुन दुईवटा भोजन तपाई अगाडि बढ्न चाहानुहुन्छ र त्यस अवधिमा सब भन्दा धनी, पौष्टिक बाक्लो खानाहरू छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईं यो प्रोटोकल अनुसरण गर्नुहुन्छ, र यसलाई चुनौतीपूर्ण शक्ति प्रशिक्षण अभ्यासको साथ मिलाउनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई वचन दिन्छु कि तपाईं आफ्नो शरीरमा र तपाईंको अनुभवमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देख्नुहुनेछ। "म ग्राहकलाई तिनीहरूको स्वास्थ्यको शुल्क लिन सहयोग गर्दछ परिस्थितिले विकल्प हटाउनु अघि। यदि साँचो शारीरिक र मानसिक सुस्वास्थ्यको जीवनको लागि तपाइँको खोजी यात्रा हो भने म तपाइँलाई ड्राइभरको सिटमा राख्छु।"
तपाईंको स्वास्थ्यलाई अन्तराष्ट्रिय उपवासको साथ सशक्त बनाउनुहोस् Reviewed by Void on 7:48 PM Rating: 5